JEWELRY – sajilO Online
जय बजरंग ज्वेलर्स (हरद्दारी बाबुको पसल)
यहा सम्पूर्ण डिजाइनका सुन-चाँदीका गर-गहनाहरु सुपथ मुल्यमा पाइन्छ ! र तपाइको अर्डर अनुसार पनि सम्पूर्ण डिजाइनका गर-गहना बनाइन्छन् ! महावीर चौक स्थित जनकपुर मारवाडी सेवा समिति नजिकै रहेको यो पसलमा विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ ! जसको लागि तपाइँ सजिलो अनलाइनको मेम्बर हुन आवश्यक छ ! थप जानकारीका लागि Read more…
By admin,2months ago September 24, 2018
यहा सम्पूर्ण किसिमका आधुनिक डिजाइनको सुनचाँदीका गर-गहनाहरु बनाउनुका साथै सुनचाँदीको कारोबार समेत गरिन्छ ! र पुरानो सुनलाई रिफाइन गरेर एक नम्बरको बनाइन्छ ! खाँदबारी – १, पोखरी बजार Pro : Shrijana Tiruwa Contact : 9852058986
खुसी सुनचाँदी पसल
खादबारी बजारमा गुणस्तरीय सुन चादीका गर गहना पाउने एक मात्र ‘खुसी ज्वेलरी उद्दोग’ हो ! यहा सम्पूर्ण डिजाइनका गर गहना बनाउनुका साथै विक्री वितरण पनि हुनुहुन्छ ! र यहा पुरानो सुनलाई रिफाइन गरि नया गहना पनि तयार परिन्छ ! खादबारी – १, हस्पिटल छेउमा यो ज्वेलरी अवस्थित छ ! यसका Read more…
मकालु सुन चादी हस्तकला उद्योग
मकालु सुन चादी हस्तकला उद्योग खादवारी नगरपालिका -१, देउरालीमा अवस्थित छ ! प्रोप्राईटर चित्र बहादुर बिस्वकर्मा द्वारा संचालन भईरहेको यस मकालु सुन चादी हस्तकला उद्योग मा सबै प्रकारका गरगहनाहरू डिजाईन गरि बनाईन्छ ! सत प्रतिसत शुद्ध सुन तथा चादीका गर गहना अर्डर बमोजिम तयार गरिने तथा रेडिमेट गरगहना समेत पाईने यस मकालु Read more…